KMF/Cnoe: “Mbola azo arenina ny lisi-pifidianana” | NewsMada
KMF/Cnoe: “Mbola azo arenina ny lisi-pifidianana”
“Ho an’ireo olona rehetra manantena fa hirotsa-kofidina ho solombavambahoaka, tsy tokony hiandry ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina vao mihetsika. Izao izy ireo dia tokony hanentana ny mpifidy eritreretiny hifidy azy hisoratra anarana ao anatin’ny lisi-pifidianana.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, manoloana ny mbola fahavitsian’ny olom-pirenena misoratra anarana ao anatin’ny lisitry ny mpifidy amin’izao fotoana izao. Nefa hifarana vonjimaika amin’ny 15 febroary ho avy izao ny lisitry ny mpifidy, ary hifarana tanteraka amin’ny 15 mey.
Mbola azo arenina ny fahavitsian’ny mpifidy misoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana, raha samy mandray ny andraikitry avokoa ireo mpisehatra amin’ny fifidianana: ny mpitondra, ireo mpirotsa-kofidina, ny firaisamonina sivily, ny antoko politika… Mbola azo arenina io, na herinandro aza sisa; eny, na ao anatin’ny roa na telo andro aza.
Manentana ny olom-pirenena hisoratra anarana ao anatin’ny lisitry ny mpifidy ho an’izay ampy taona àry ny KMF/Cnoe. Ho an’izay efa nifidy, mila manamarina hatrany izy ireo hoe: mbola ao anatin’ny lisi-pifidianana ve ny anarany?
Tsiahivina fa anisan’ny mangataka ny tokony hanokafana mandavantaona ny lisitry ny mpifidy ny KMF/Cnoe ka afa-misoratra anarana amin’izany amin’ny fotoana rehetra ny olom-pirenena.